मत्ती ३ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
३ ती दिनहरूमा, बप्तिस्मा* गराउने यूहन्ना यहूदियाको उजाडस्थानमा * आएर यसो भन्दै प्रचार गर्न लागे: २ “पश्‍चात्ताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिकै आएको छ।” ३ वास्तवमा, यूहन्ना तिनै व्यक्ति हुन्‌, जसबारे भविष्यवक्ता यशैयाले यी शब्दहरू भनेका थिए: “सुन! उजाडस्थानमा कोही कराइरहेछ, ‘हे मानिसहरू हो, यहोवाको बाटो तयार पार, उहाँको मार्ग सोझो बनाओ।’ ” ४ यूहन्ना उँटको रौंबाट बनेको लुगा लगाउँथे अनि कम्मरमा छालाको पटुका कस्थे; तिनको भोजनचाहिं सलह र वन-मह थियो। ५ त्यसबेला यरूशलेम, सारा यहूदिया र साथै यर्दन नदी वरिपरि सबै इलाकाका मानिसहरू तिनीकहाँ आउँथे। ६ अनि मानिसहरूले आ-आफ्ना पापहरू खुलेआम स्वीकार्थे र तिनले यर्दन नदीमा उनीहरूको बप्तिस्मा गराउँथे। ७ जब तिनले थुप्रै फरिसी* र सदुकी * बप्तिस्मा गर्ने ठाउँमा आउँदै गरेको देखे, तिनले उनीहरूलाई यसो भने: “हे विषालु सर्पका बच्चाहरू हो, आउँदै गरेको क्रोधबाट भाग्न तिमीहरूलाई कसले सिकायो? ८ यसकारण पश्‍चात्ताप लायकको फल फलाओ। ९ अनि ‘हाम्रो बुबा अब्राहाम हुनुहुन्छ’ भनी तिमीहरू नठान। किनकि म तिमीहरूलाई भन्छु, परमेश्वरले यी ढुङ्गाहरूबाट अब्राहामको निम्ति सन्तान खडा गर्न सक्नुहुन्छ। १० बन्चरो रूखको जरामा परिसकेको छ। त्यसैले असल फल नफलाउने हरेक रूख काटी ढालिनेछ र आगोमा फालिनेछ। ११ म त पानीले तिमीहरूको बप्तिस्मा गराउँछु किनकि तिमीहरूले पश्‍चात्ताप गरेका छौ तर मपछि आउने मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता खोल्न लायकको समेत म छैन। उहाँले पवित्र शक्ति र आगोले तिमीहरूको बप्तिस्मा गराउनुहुनेछ।* १२ निफन्ने बेल्चा* उहाँको हातमा छ। उहाँले आफ्नो खलो पूरै सफा गर्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँलाई धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ तर भूसलाई चाहिं कहिल्यै निभाउन नसकिने आगोमा जलाउनुहुनेछ।” १३ तब यूहन्नाद्वारा बप्तिस्मा गर्न येशू गालीलबाट यर्दन नदीमा आउनुभयो। १४ तर यूहन्नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोक्न खोजे: “मैले पो तपाईंबाट बप्तिस्मा गर्नु आवश्यक छ, उल्टै तपाईं मकहाँ आउँदै हुनुहुन्छ?” १५ येशूले तिनलाई जवाफ दिनुभयो: “अहिलेलाई यस्तै हुन देऊ। किनकि यसरी नै हामीले परमेश्वरको सबै इच्छा पूरा गर्नु उचित हुन्छ।” त्यसपछि तिनले उहाँलाई रोकेनन्‌। १६ बप्तिस्मा भएपछि येशू तुरुन्तै पानीमाथि निस्कनुभयो अनि हेर, आकाश खुल्यो र परमेश्वरको पवित्र शक्ति ढुकुरको रूपमा ओर्लेर उहाँमाथि बसदै गरेको तिनले देखे। १७ साथै, आकाशबाट यसो भन्ने आवाज पनि आयो: “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्‌, जससित म अति प्रसन्न छु।”
^ मत्ती ३:१ * यो एउटा धार्मिक रीति हो, जसमा बप्तिस्मा गर्ने व्यक्तिलाई पानीमा चुर्लुम्मै डुबाएर निकालिन्छ।
^ मत्ती ३:१ * यसले पातलो बस्ती भएको ठाउँलाई बुझाउँछ।
^ मत्ती ३:७ * इस्वी संवत्‌ प्रथम शताब्दीको यहूदी धर्मको एउटा प्रमुख पन्थ।
^ मत्ती ३:७ * यहूदी धर्मको पुजारीवर्गसित सम्बन्धित एउटा प्रमुख पन्थ, जसले मरेका मानिसहरू पुनर्जीवित हुन्छन्‌ भन्ने शिक्षामा वा स्वर्गदूतमाथि विश्वास गर्दैनथे।
^ मत्ती ३:११ * अर्थात्‌, “पवित्र शक्तिले अभिषेक गर्नुहुनेछ र आगोले नाश गर्नुहुनेछ।”
^ मत्ती ३:१२ * अन्न र भूस छुट्टयाउन प्रयोग गरिने साबेलजस्तो काठको औजार।